MIUI 11 ayaa la bilaabi doonaa bisha Sebtember iyada oo lagu shaqeyn doono shaqooyin cusub | Androidsis
MIUI 11 wuxuu imaan lahaa Sebtember isagoo wata warar kala duwan
Bilowga sanadka ayaa Xiaomi waxay xaqiijisay inay horeyba uga shaqeynayeen MIUI 11. Tani waa nooca cusub ee lakabka qaabeynta ee nooca Shiinaha. Bilaabisteedu marba marka ka dambeysa way soo dhowaaneysaa, sida ay sheegeen warbaahinta kala duwan. Waxay si rasmi ah u imaan kartaa Sebtembar, markaa waxay noqon doontaa arrin toddobaadyo ah ka hor intaanan wax walba ka ogaanno noocaan cusub.
MIUI 11 wuxuu la imaan doonaa warar taxane ah loogu talagalay taleefannada calaamadaha. Bililahaan oo dhan noocyada kala duwan ee xanta ayaa soo daadanayay, laakiin in yar ayaan inbadan ka ogahay waxa Xiaomi ay ku soo bandhigeyso lakabkeeda cusub ee qaabeynta, oo ku saleysan Android Q.
Xiaomi waxay naqshadeysay astaamo cusub oo nidaam ah MIUI 11. Sida ku xusan shirkadda, naqshadeynta waxay ka timid xoq, sidaa darteed waxay u muuqataa inay aad uga duwanaan doonaan kuwa aan ku haysanno nooca hadda loo yaqaan 'cape'. Dhinaca kale, sida ay faallo ka bixiyeen dhowr toddobaad ka hor, Xayeysiiska waa lagu yareyn doonaa
Dhinaca kale, nuqulkan cusub ee koofiyadda ayaa soo bandhigi doona a hab badbaadin batteri xad-dhaaf ah. Qaabkan cusub wuxuu joojinayaa dhammaan howlaha nidaamka marka laga reebo wicitaannada ama farriimaha, marka lagu daro inuu u rogo is-dhexgalka 'monochrome'. In kasta oo ay noqon doonto qaab aan kala jaanqaadi karno, oo u oggolaan karno barnaamijyada qaarkood inay shaqeeyaan.
MIUI 11 sidoo kale wuu naga tagi doonaa bar ogeysiis filaayo in kiiskan. Waxa kale oo la kordhin doonaa taageerada barnaamijyada habka mugdiga ah. In kasta oo uu jiro isbeddel xiiso leh shaashadaha, maadaama laga tirtiri doono mar haddii lala wadaago dad kale. In kasta oo ay umuuqato inay noqon doonto hawl aan dhaqaajin karno.
Xiaomi ayaa la filayaa inay soo bandhigto MIUI 11 wax yar ka dib. Sebtember waxay umuuqataa inay tahay taariikhda ay calaamadda Shiinuhu maanka ku hayso, laakiin xilligan ma jiraan taariikho cayiman oo kiiskan ah. Sidaa darteed, waa inaan sugnaa inta warar dheeri ah ka soo baxayaan waxyar, gaar ahaan marka hore in la soo bandhigo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » MIUI 11 wuxuu imaan lahaa Sebtember isagoo wata warar kala duwan
Huawei Mate 20 Pro wuxuu ku helaa shaqada DC Dimming iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub